Waxyeelada COVID-19 oo sii Kordheysa
Kiisaska COID-19 ee dunida ayaa ku dhow 14 milyan oo kiis iyadoo ku dhowaad lix boqol oo kun oo qofna ay cudurkan ugu geeriyoodeen adduunka oo dhan. Cilmi baarayaal ka tirsan Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Minnesota ayaa sheegay kuna caddeeyey tijaabo kale oo ay sameeyeen in daawada malariyada loo qaato ee hydroxychloroquine aysan waxtar u lahayn daaweynta xilliga hore ee bukaano qabay cudurka coronavirus.
Dhinaca kale, shirikadaha dayuuradaha ee Qaaradda Africa ayaa si gaar ah ugu nuglaaday saameynta xanuunka Covid-19, iyagoo haatan kaalmo ka doonaya dowladdo markii horeba la daalaa dhacay dhaqaale xumida xanuunkan ka soo wajahday.
Shirkadaha Ethiopian Airlines, South African Airways iyo Kenya Airways ayaa ka mid ah shirkadaha Africa ee qasaaraha xooggan uu soo gaarayo. Waxaana shirkadaha Africa ee duulimaadka laga yaabaa inay qasaaraan lacag gaareysa 4 bilyan oo dollar sanadkan 2020ka oo kaliya ah.
Maxamed Bashiir iyo Sahra Ciidle Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
Dhageyso warakii u dambeeyey ee COVID-19